TaKhon – Sharing daily news for you
Sharing daily news for you
international celebrity lifestyle
ပွဲတော်ရက်မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ ဆောင်ဂျွန်ကီရဲ့ ပုံတွေ ထွက်ပေါ်
September 27, 2018 October 4, 2018 Thein Oo0Comments
မင်းသားချော ဆောင်ဂျွန်ကီကတော့ Chuseok (Thanksgiving) ပွဲတော်ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်တွေ လုပ် ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ မော်ဒယ် Park Youngsun နဲ့ အတူတွဲပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ ဆောင် ဂျွန်ကီရဲ့ ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
September 27, 2018 September 27, 2018 Thein Oo0Comments
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ရည်းစားဟောင်းရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်သတင်းတွေကြောင့် ဆယ်လီနာဂိုးမက်စ်တစ် ယောက် အတော့်ကို စိတ်ပျက်နေပါပြီ။ သူမအနေနဲ့လည်း နှစ်ရှည်လများ သံယောဇဉ်နဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရည်း စားဟောင်း ဂျက်စတင်ဆီကြောင့် အသည်းကွဲခဲ့ ရတယ်ဆိုပေမယ့် အခုတော့ အချစ်သစ်ထပ်မံ ရှာဖွေဖို့ကြိုးစား နေပါပြီ။
(၈) မိနစ်လောက်ပဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းရခဲ့တဲ့ Robert Downey Jr.
September 27, 2018 September 27, 2018 Thein Oo 1 Comment
Robert Downey Jr. ဟာ Spider-Man: Homecoming မှာ Iron Man အနေနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနည်းနည်းသာပါခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ့အတွက် ဒေါ်လာ (၁၀) သန်း (ယူရိုငွေ ၇ သန်း) ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိန်းမတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ဗိုက်ကြီးတဲ့အခါ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားပြီးရင် အလိုအလျောက်ပြန်ချပ်သွားတတ်ပေမယ့် ယောက်ျားတွေဗိုက်ကြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ့အလိုအလျောက်ဗိုက်ပြန်ချပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှသာ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါနဲ့ယောက်ျားတွေက ဗိုက်ကြီးတတ်လို့လား? ကြီးတတ်တာပေါ့….မိန်းမတွေလို ဗိုက်ထဲကလေးရှိလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူး…. အရက်၊ဘီယာသောက်တာကြောင့် ကြီးတဲ့ဗိုက်ပါ။ ‘ဘီယာဗိုက်’ လို့အမည်တွင်ပါတယ်။ (တကယ်တမ်းတော့ ‘ဘီယာဗိုက် ‘ဟာ
အနုပညာကြေး အမြောက်အများနဲ့ မိဘတွေကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့ အုပ်စိုးခန့်
အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ အဆိုရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရရှိထားပြီး မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဝေဖန်မှုကြားကနေ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့
ပျောက်ဆုံး,မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ရဲ့နောက်ကွယ်က ပဟေဠိဖြစ်တွေနဲ့ အမြွာညီအစ်မ
September 24, 2018 takhon0Comments
ကမ္ဘာကျော်လေယာဉ် ပျောက်ဆုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MH370 မလေးရှားယာဉ် ပျောက်ဆုံးမှုကြီးဟာ အခုအချိန်ထိ အာဏာပိုင်တွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဖြေမရှာနိုင်သေးတဲ့ ထူးဆန်းသော ပျောက်ဆုံးမှုကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ MH370 လေယာဉ်ပေါ်မှာ စီနင်းလိုက်ပါသွားသူ (၂၃၈)ယောက်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ကြီးဟာ ရန်သူ့လေယာဉ်နဲ့ မှားပြီး ပစ်ချခံရသလိုလို၊ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ပျက်ကျသွားသလိုလို ပဟေဋ္ဌိတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ MH370 လေယာဉ်ကြီး မပျောက်ဆုံးခင်က အဲဒီလေယာဉ်ကို မောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူး Zaharie Amhad
တောင်-မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရဲ့ လုံးဝမတူကွဲပြားနေတဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ
တောင်-မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဆိုတာ ယခင်က တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်ဒေသထဲက တစ်အူထုံဆင်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အာဏာရှင်တွေအချင်းချင်း အာဏာပြိုင်၊ လက်နက်ပြိုင်၊ နယ်မြေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်လာပြီး၊ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ ခလောက်ဆန်ဝင်နှောက်မှုကြောင့် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ ကွဲခဲ့ရပါတယ်။ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ တောင်-မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို မြင်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) တောင်ကိုရီးယား
ရေလွှာလျှောစီးရင်း အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဗီဒီယို
အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စီးပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေ ရေလွှာလျှောစီးဖို့အတွက် လှိုင်းတုလုပ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ပျော်ချင်စောနဲ့ လှိုင်းတုရဲ့ရေဆုန်အားကို မသိဘဲ မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ ရေလှိုင်းစီးမိသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အရှက်တကွဲအကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကပဲ ချောင်လွန်းနေတာလားတော့မသိဘူး ရေလှိုင်းစီးရင်း ဘယ်လောက်မှမကြာသေးတဲ့ အချိန်မှာပဲ
မြန်မာပြည်မှာက ချစ်တာနဲ့ ကြိုက်တာကို လွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ အိစိကွေး
September 24, 2018 September 24, 2018 takhon0Comments
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝကနေ လက်ရှိမှာတော့ မော်ဒယ် အဆိုတော် မင်းသား တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အိစိကွေးကိ်ုတော့ ပရိသတ်အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ လက်ရှိမှာ ဟန်နာယူရီနဲ့ သီချင်း MTV လေးရိုက်ထားပြီး ကောလဟာလအနည်းငယ်လည်း ထွက်နေတာကြောင့် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသွားခဲ့ကာ
အတိတ်ကာလက ပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြရင်း ကိုယ်ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကို မမေ့ရဘူးဆိုလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အတိတ်ကာလက သင်ခန်းစာယူစရာတွေဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ် ။ အခုတစ်ခေါက်မှာလည်းနေခြည်ဦးတစ်ယောက် အတိတ်ကာလက သူမရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအစစ်အမှန်တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ချပြလိုက်ပါပြီ။ အခုလိုချပြလိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ပွဲဆူစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ နေခြည်ဦးတစ်ယောက် …..”အဖေကသင်ပေးထားတယ်လူဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်ကလာလဲ ဘယ်တော့မှ
ပရိတ်တွေ အားလုံးကို အံ့အားသင့်သွားစေတဲ့ မိုးဟေကို ရဲ့ လက်ပတ်နာရီ တန်ဖိုး
မိုးဟေကိုဟာ အနုပညာသက်တမ်း (၁၀) နှစ်အတွင်း ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို ၃၀၀ နီးပါးထွက်ရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးအနေနဲ့ရော လက်ရှိအနုပညာကြေး တတိယအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ၅ကားလောက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ဒီနာရီလောက်ကစာမဖွဲ့ဘူးဆိုတာ မိုးရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေဇယားများကသက်သေခံလျက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစပြီး မြန်မာ့သရုပ်ဆောင်လောကရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြေးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးသုံးလက်ထဲမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ဇာတ်ကားဝင်ငွေတွက်ချက်ကြည့်ရင်
ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်, သင့်ဘော်ဒါအရင်းကြီးကို ချက်ချင်းလွမ်းသွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံလေးတွေ
လူတိုင်းမှာ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်၊ ဘော်ဒါအပေါင်းအသင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်း ဆိုပါစို့။ ငယ်သူငယ်ချင်းတိုင်းကိုတော့ လူတိုင်းက အမှတ်ရနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်နဲ့ ဝါသနာတူ၊ အကြိုက်တူ၊ စိတ်ကူးတူ၊ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိ၊ တစ်ယောက်အပြစ်ကို တစ်ယောက်က ခွင့်လွှတ်နဲ့ တကယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ဦး ရှိခဲ့မှာပါ။
ဓားပြီးကြောင်း သက်သေပြရင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓားနဲ့ထိုးမိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ နတ်ကတော်
နတ်ကတော်တစ်ဦးဟာ နတ်ပွဲတစ်ခုမှာ မိမိကိုယ်ကို ဓားပြီးကြောင်း သက်သေပြရင်း၊ ရင်ဘတ်အတွင်းကို ဓားထိုးသွင်းမိကာ အသက်သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့အနီးက ကျေးလက်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သေဆုံးသူကတော့ Clairvoyant Theprit Palee လို့အမည်ရတဲ့ နတ်ကတော် ဖြစ်ပါတယ်။ Palee ဟာ အသက်(၂၅)နှစ်သာ ရှိသေးပြီး
ပုံအလန်းလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်
ဘေဘီမောင်ကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုကို အပြည့်အ၀ ရထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပါ။မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ကို အ၀တ် များ ပေမယ့် အလုပ်သဘောအရ လိုအပ်လာရင်လည်း အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင် တတ်သူပါ။ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရထားတဲ့ဘေဘီမောင်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ခရီးတွေ ထွက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့
ဥရောပ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ ဇနီးမောင်နှံ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ကြိုးစားဖန်တီးနေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇာဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်ဇနီးမာင်နှံနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့
ရွှေထူးနဲ့ရွှေမှုံနဲ့ကတော့ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုရဲ့ အရိုနိုင်ဆုံး Celebrity စုံတွဲလို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရွှေမှုံတို့ရဲ့အချစ်ရေးလမ်းခရီးက ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးမှုတွေနဲ့ချည်းပဲစတင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရွှေထူးက သူ ခြောက်နှစ်ကြာတွဲခဲတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပြတ်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ ရွှေမှုံကို တွဲခဲ့တဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရသေးတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း
ပရိတ်သတ်တွေဆီကနေ မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ ရလိုက်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတစ်ယောက် အတိုက်အခိုက်တွေကြားထဲက အနုပညာလောကထဲကို လျှောက်လှမ်းလာတာ တစ်လကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ။ ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဖန်အချင်းချင်း ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာ အားတင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်ပွဲကို လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို တခဲနက်ရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ ဝင်းနားဆုရှင် ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ မောင်ချို
ဇာတ်ကား တစ်ကားလုံးမှာ လူ(၁)ယောက်နဲ့ ကား (၂)စီးပဲ ပါပြီး ဆုတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင် (မှတ်ချက် ။ မြန်မာကား မဟုတ်ပါ)
ဘလော့တစ်ခု က ပြောစကားအရ ဆိုရင် ဒီဇာတ်ကား ဟာ အနုပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခု ကို တက်ခွင့်ရဖို့ အတွက် ဒါရိုက်တာ စတီဗင်စပီးဘတ် က ကျောင်းလျှောက်လွှာဝင်ခွင့်မှာ နမူနာ ပြခဲ့တဲ့ လက်ရာ တစ်ခု ဖြစ်တယ် လို့
​နေမ​ကောင်းတဲ့ချစ်​သူ​လေး​ကို စိတ်​ပူပြီး ပြာယာခတ်​​နေတဲ့ ​ရွှေမှုံရတီ
အဆို​တော်​​ရွှေထူးနဲ့ အ​ချေမင်းသမီး​ချော​လေး ​ရွှေမှုံရတီတို့ချစ်​သူနှစ်​ဦးက​တော့ တစ်​ဦးနဲ့တစ်​ဦး နားလည်​မှု​တွေ၊ စစ်​မှန်​တဲ့ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာ​တွေအပြည့်​နဲ့ ​ရှေ့ဆက်​​နေကြတာပါ။ တစ်​​ယောက်​ကိုတစ်​​ယောက်​လည်း ကြင်​နာတတ်​လွန်းတဲ့သူတို့နှစ်​ဦးရဲ့ ချစ်​စဖွယ်​အပြုအမူ​လေး​တွေ​ကြောင့်​လည်း ​ရွှေထူးနဲ့ ​ရွှေမှုံတို့ရဲ့အ​ကြောင်းက ပရိသတ်​​တွေရဲ့ကြားမှာ ​တော်​​တော်​​လေးကို ​ရေပန်းစား​နေတာပါ။ ဒီ​နေ့​လေးမှာလည်း ​ရွှေထူးက ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတာမို့ ​ရွှေမှုံရတီတစ်​​ယောက်​ ​ချစ်​သူ​ကို
ခွဲရခက်လောက်အောင် ရုပ်ချင်းဆင်ကြသည့် ဟောလိဝုဒ်အကျော်အမော်များ
စာဖတ်သူသာ ဟောလိဝုဒ် Fan တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ယခုဖော်ပြပေးမယ့် ခွဲရခက်လောက်အောင် ရုပ်ချင်းဆင်ကြတဲ့ဆယ်လီတွေကို မြင်ဖူးမှာပါ။ သူတို့ထဲက တချို့ကိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့နာမည်တွေနဲ့ မျက်နှာတွေကိုတော့ တစ်ထပ်တည်းကျအောင်မှတ်မိနေဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ Fan
takhon.com မှာ တင်ဆက်ထားသော content များသည် ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ.. အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲနေသော စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို လူအများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်. . .
မီဒီယာများ အနေနဲ့ မိမိတို့ content များကို takhon.com မှာ ကူးယူဖော်ပြတာကို ကန့် ကွက်လိုပါက [email protected] ကို စာရေးသားပေးပို့ကန့် ကွက်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ. . . . . . .
Copyright © 2018 TaKhon. All rights reserved.